Farmaajo oo Xildhibaanno ka dhigaya Shaqaale katirsan Villa Somalia | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Macluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa waxay sheegayaan in Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu doonayo in uu xildhibaanno ka dhigo shaqaale ka tirsan Villa Somalia iyo rag ay isku fiican yihiin.
Qaar ka mid ah shaqaalaha cuntada, kuwa ammaanka, shaqsiyaad isaga si gaar ah ula shaqeeya ayuu u balanqaaday in uu siinayo lacago si ay xildhibaanno u noqdaan.
Villa Somalia ayaa laga dareemayay muddooyinkan dambe mashquul aad u badan, waxaana isugu imaanayey dad aan ehel u ahayn siyaasadda, balse raba iney ka faa'ideystaan fursaddan.
Farmaajo oo lacag badan haya ayaa doonaya inuu kusoo laabto talada dalka, sidaasi darteeda waxaa qasab ah inuu bilaabo bixinta lacago laaluush ah.
"Yar aan saaxiib nahay wuxuu iigu dhaartay in madaxweynaha uu ka bixin doono lacagta doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka, waxaana arrintaasi usoo dhammeeyey mas'uul ka tirsan Villa Somalia, waxaana la doonayaa in dib loo doorto Farmaajo" sidaasi waxaa inoo sheegay qof xog ogaal ah oo sababo amni magaciisa u qarinnay.
Doorashada Xildhibaannada ee soo aaddan ayaa noqon doonta midda ugu qarashka iyo fowdada badan marka loo eego doorashooyinkii hore.